Kukiyada leh shukulaatada madow, macaan! | Bezzia
Dayrtu waa mid aad u badan waqti fiican oo lagu dubo cookies. Bezzia, marna ma caajisno inaan shidno foornada, laakiin waxaan fahansanahay in meelahaas kuleylku ku cadaadinayo, ay kugu adkaan doonto. Markaa haddii aadan weli ku sii hayn, keydso cuntadan shukulaatada madow ee dambe.
Bezzia iskama celin karno. Waxaan isla markiiba hoos u dhignay meherad ka dib saaxiibkeen, ka dib markii aan isku daynay buskudyadan, waxay noo qoreen cuntadeeda. Waa buskudyo fududweliba, iyagu ma cabsadaan. Waxaad u baahan doontaa, haa, gacan mug leh oo maaddooyin ah si aad u samayso.
Maadaama aad heli doonto waqti aad ku hubiso buskudyadan waxay leeyihiin a xaddi badan oo sonkor ah, sidaas darteed ma habboona in la cuno maalin kasta. Laakiin waxay yihiin kuwo cajiib ah oo na siiya daw macaan, aad u macaan! Waxay leeyihiin bannaanka qallafsan iyo gudaha gudaha oo aad u qurux badan. Maxaan kaloo weydiisan karnaa? Ma jeceshahay cookies-yada aan sonkorta lahayn? Tijaabo waxaad tahay yicib.
1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay (20 unug)
Waxyaabaha ay ka kooban tahay (20 unug)
180 g. subagga
170 g. sonkorta buniga ah
50 g. sonkor cad
1 ukun + 1 ukun ah
1 Soosaarida vaniljada shaaha
130 g. bur bur
65 g. burka qamadiga
½ qaado yar oo soodhaha ah
140 g. shukulaatada madow
Dhalasho subag digsi kuleyl dhexdhexaad ah iyo rooti. Marka xigta, subagga ku shub baaquli weyn oo ha qaboojiyo.
Marka subagga uu ku jiro heerkulka qolka, ku dar sonkorta oo ku qas dhowr ulood gacanta ama korontada.
Kadib ku dar ukunta, ukunta ukunta iyo nuxurka vanilj oo garaac mar labaad si aad u hesho tiro isku mid ah.
Kadib ku dar burka xoogga, burka sarreenka, khamiirka, bicarbonate -ka, milixda iyo qanjaruufka lowska oo isku qas dhaqdhaqaaqyada bakhshadda ilaa ay si fiican ugu dhex milmaan cajiinka.
Ugu dambeyntii jarjar shukulaatada qaybo mindi ku dar oo ku dar.
Isticmaal laba qaadooyin si aad u qabato bur-burinta cabbirka walnut in aad kaga tagi doontid xeedho ama saxaarad lagu xardhay warqad dufan leh. Kadib, saxanka ama saxanka ku rid qaboojiyaha 30 daqiiqo si ay cajiinka u adkaato.
Hadda, preheat foornada ilaa 180ºC oo saxanka wax lagu dubo ku xaji warqadda warqadda.
Ku dheji kubadaha cajiinka, leh laba farood oo midba midka kale u dhexeeyo si marka ay ku sii fidayaan kulaylka aanay ku dhegin.
Saxarka gee foornada iyo kari ilaa 180ºC 12 daqiiqo ama ilaa cidhifyadu dahab yihiin.
Ugu dambayn, ka saar foornada iyo ha ku nastaan ​​10-15 daqiiqo ka hor inta aanad u wareejin sagxad si ay u dhammeeyaan qaboojinta.
Ku raaxayso buskudka shukulaatada madow, keligaa ama kafee, caano ama cabbitaan khudaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Postres » Kukiyada leh shukulaatada madow, macaan!
Furayaasha doorashada duvet